Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Website-ka rasmiga ah ee CHPW ee barta internetka rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka noocaas ah wadar ahaan si aan u fahamno sida isticmaaleyaasheena, koox ahaan, ay u isticmaalaan adeegyada iyo ilaha lagu bixiyo bartayada. Markii aan dhahno waxaan u isticmaalnaa macluumaadka wadar ahaan, taasi waxay ka dhigan tahay in macluumaadka koox shaqsiyaad ah la soo uruuriyay oo laga baaraandegay si aan qofna macluumaadkiisa u gooni u noqon. Waxaan barannaa isku-darka macluumaadka si aan u baranno aagagga websaydhkan ugu caansan, aagagga u baahan hagaajinta, iyo farsamooyinka la adeegsanayo si aan u horumarin karno degelkan.
Inta badan daalacashada shabakada ayaa lagu wadaa inay aqbalaan cookies. Waad u dejin kartaa biraawsarkaaga inuu diido cookies, ama inuu ku baraarujiyo markii cookies la dirayo. Haddii aad sidaas sameyso, fadlan la soco in astaamaha qaar ee degelkan laga yaabo in uusan si sax ah u shaqeyn.